राजसंस्था हटाउन मा कसको हात अनि कसको फाइदा? - MILSALLY
Home - Nepali-नेपाली - राजसंस्था हटाउन मा कसको हात अनि कसको फाइदा?
राजसंस्था हटाउन मा कसको हात अनि कसको फाइदा?
राजसंस्था फालिएकोमा आजपनि धेरै मानिसहरु गर्व गर्ने गर्नेछन्। तर पनि के यो फाइदाजनक थियो त? नेपालीहरुले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। राजसंस्था फलिनुको मुल रहस्य त दरवार हत्याकाण्ड मै जोडिएको छ। तर यो भने अझै पत्ता लागेको छैन कि कसले दरवार हत्याकाण्ड रचेको थियो। हत्याकाण्ड को रचयिता जो भएपनि ज्ञानेन्द्र सरकार र पारस सरकार मिथि दोष थुपारिएको देख्न सकिन्छ। यो लेख मा म केही कुराको विश्लेषण गर्नेछु। यो मेरो आफ्नै भावनात्मक विश्लेषण हो तसर्थ मन नपरे पनि मेरो वाक् स्वतन्त्रताको कदर गर्नु होला।
१. दरवार हत्याकाण्ड को पछाडि को थियो?
ज्ञानेन्द्र र पारस सरकार हत्याकाण्ड मा मारिनु भएन भन्दै मा दोष उनुहरु माथि थुपार्न कति सम्म को जायज कुरा हो? मलाई त लाग्छ दरवार हत्याकाण्ड पनि राजसंस्थाको पतन कै लागि रचिएको थियो। राजा विरेन्द्र को विरुद्ध नेपाली जनतालाई भड्काउनु सजिलो थिएन। तसर्थ उनको वंशनास गरियो र ज्ञानेन्द्र र पारस सरकारलाई जिउँदै छाडियो। परिणाम ज्ञानेन्द्र को विरुद्ध नेपाली जनता भड्काउन सजिलो भयो। हुन पनि गरेकै हुन्। तत्कालीन नेताहरुले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाईमारा भन्दै नेपाली जनता लाई सडकमा उतारेकै हुन्।
कति सजिलो भयो नेता ज्यु हरुलाई राजसंस्था फाल्न। माया लागेर आउँछ जब म त्यो दिन सम्झन्छु। सोझा जनतालाई कसरी भड्काएका थिए। जनताकै बलि चढ्यो जनता नै मारिए। कसैले दाजुभाइ गुमाए कसैले आमाबाबु त कसैले दिदीबहिनी। कति महिलाको सिउँदो पुसियो। तर फाइदा के भयो? एउटा राजा फालेर हजारौं छोटे राजा पाल्न पर्यो। युवाहरू विदेशिनु पर्यो। विदेशी दलाल र विदेशी शक्ति को हात मा देशको स्वाभिमान सुम्पिनु पर्यो।
Related: Personal analysis of Royal Family Massacre: A true king oracriminal? (1)
२. फाइदा कसलाई भयो त?
राजसंस्था फालिनुमा फाइदा कसलाई भयो त? नेपाली जनतालाई? नेपाली जनतालाई थ के फइदा भएको छ र? नेपालीहरुले संविधान पाए? त्यो संविधान जुन उपयोग पनि राम्ररी भएको छैन। बलात्कारीलाई उचित सजाय दिन सक्दैन। भ्रष्टाचारीलाई कारवाहि गर्न सक्दैन। ठिकै छ राजसंस्था फालिएपछि पनि बाटोघाटो, पुल, आदि इत्यादी बने होला। तर के त्याहा विना भ्रष्टाचार काम भएको छ? बाटोघाटो, पुल र अन्य विकास निर्माणका कामहरू त राजाका पालामा पनि भएकै थिए। फाइदा कसको भयो त? केवल भ्रष्टाचार गर्ने ठुलाबडा पोष्टमा भएका व्यक्तिहरु को। र उनिहरुका आफन्तजन को जसले पनि कुनै न कुनै सरकारी पद पाएर माज्जाले कमाई रहेका छन्।
फइदा कै कुरा गर्नुहुन्छ भने त सबैभन्दा फाइदा हाम्रै छिमेकी लाई भएको देखिन्छ। राजसंस्था फालिए लगतै नेपालका कलकारखाना हरु पनि बन्द भए। येसमा पनि ठुलै सड्यन्त्र रहेको हुनु पर्छ। पहिला पहिला नेपालमै उत्पादन हुने सामान अहिले भारतबाट भित्र्याउन पर्छ। त्यसैले त भारतलाई पनि नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई आफ्नो अधीन मा राख्न सजिलो बन्दै गएको छ। हाम्रो नेता ज्यु हरुलाई भने कलकारखाना को भन्दा कुर्सी कै माया छ। कुर्सी अरुलाई दिनु भन्दा त फेरि चुनाव गराउन राम्रो लाग्ने नेता ज्युलाई यो थाहा हुन पर्ने कि चुनाव मा लाग्ने खर्च नेपाली जनताको कमाई हो। केही नेपालमै दुख गरेर कमाएको भने केही खाडीमा खुन र पसिना बेचेर।
बाकी रह्यो “हामी याहा छौ” भन्ने नेता ज्यु हरु। “बलात्कारी याहा छ” “हाम्रो लिपुलेक कालापानी खोइ?” “हाम्रो कलकारखाना खोइ?” “हाम्रो धर्म संस्कृति खोइ?” भनेर कोहि नेता ज्युहरु सडकमा आएको देख्नु भएको छ? कुर्सी को लागि त जे पनि हुन्छ याहा। हुन त कामई नै कुर्सी मा छ। ७० करोड को भ्रष्टाचार नेपाली जनताले बिर्सिएर बस्न त सक्दैनन् होला।
अन्त मा राजसंस्था फालिनुको मुख्य कारण के त? दरबार हत्याकाण्ड को पछाडि ज्ञानेन्द्र सरकार र पारस सरकार हुनुहुन्थ्यो भने हत्याकाण्ड अन्यत्र ठाउँमा गराउन सक्नुहुन्थ्यो। किन दरबारमै गराएर “म दोषि हुँ” भन्ने पहिचान छाड्नु हुन्थ्यो होला र। यो सबै त उँहाहरुलाई दोषि देखाउने सड्यन्त्र माज्ञ थियो। तर पनि कति सजिलै विदेशी शक्ति को आड नलिएर जनता को नाशो जनता लाई फिर्ता दिएर जानू भयो।
Related: What would you choose? Beingaslave ofaNepali King or beingaslave of other countries? – 1
If you want to publish your article in our site then you can contact us or send us mail at admin@milsally.com. Appropriate credit will be provided.
Next Post‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउने युवकहरु पक्राउ
‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउने युवकहरु पक्राउ
विमान दुर्घटना हुनु भन्दा १० मिनेट अगाडी आफ्नो छोराछोरीसँग आमाले खिचेको त्यो अन्तिम हृदयस्पर्शी फोटो
“राजा विरेन्द्र सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो ‘येसले मेरो देश बिगार्यो” – कथा
Pingback: “राजा विरेन्द्र सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो 'येसले मेरो देश बिगार्यो" – कथा - MILSALLY